Ndị na-ere ọgwụ na ụlọ ọrụ - China Manufacturers Manufacturers
Ọnụnọ anyị zuru ụwa ọnụ
Ọ na-eji gafee ụlọ ọrụ, ọgwụ, electronical; A na-ejikarị ngwaahịa a eme ihe maka nkwadebe nke isi akụrụngwa nke ọgwụ antipsychotic, dị ka fluguabutanol, daloglabenzene, trihaloperidol, trifluoroperidobenzene, pentafluorolidol, quinolones ciprofloxacin, wdg. N'otu oge ahụ, a pụkwara iji ya maka njirimara nke pesticides, akwa ogbu, plastik na resin polima. Ihe odide nke fluorobenzene na γ - chlorobutyryl chloride nwere ike ịmepụta γ ̵
Ọdịdị: Pipe mmiri mmiri Ọcha: 99.9% min Mmiri: 0.03% max Agba (Pt-Co): 10 max Hydrocyanic Acid (mg / kg): 10max Ammonia (mg / kg): 6max Acetone (mg / kg): 25max Acrylonitrile ( mg / kg): 25max Propionitrile (mg / kg): 500max Fe (mg / kg): 0.50max Cu (mg / kg): 0.05max 150kg / drum, 12Mt / FCL ma ọ bụ 20mt / FCL UN No.1648, Klas: 3, Nchịkọta ngwugwu: II analysisChemical analysis na instrumental analysis. Acetonitrile bụ ihe na-agbanwe agbanwe na ihe mgbaze maka kromatography oyi akwa, akwụkwọ chromatography, spectroscopic a ...
☑200kg / drum, 16mt / FCL ma ọ bụ ISO tank ☑UN No.2929, Klas: 6.1, ingtù nchịkọta: M hy Methyl fluoroacetate bụ kemịkal na-egbu egbu nke ukwuu, nke nwere ike ịkpali anya, sistem iku ume na akpụkpọ, ọ dịkwa ize ndụ ịkpọtụrụ ya na mberede FLUOROACETIC acid na-ere ọkụ ma nwee ike mepụta hydrogen fluoride gas, kemịkal na-egbu egbu, mgbe ọkụ. Mgbu nke methyl fluoroacetate bụ na ọ na-eme hydrolyzes ka ọ bụrụ FLUOROACETIC acid, nke na-agwakọta na coenzyme A nke cell mitochondria iji mepụta fluoroacetyl CO ...
Acid na-eme ka Crotonic
Ọdịdị na-acha agba aja aja bekee cystalline ngwaahịa Ọcha (GC) 99.0% min Mmiri 0.2% max Iron 3ppm max Ndị ọzọ na-ebupụta ngwa ngwa ndị ọzọ 1ppm max 100kg / Fiber drum, 16Mt / FCL UN No.2823, Klaasị: 8, Ndị na-ebu ngwugwu: III ☑ O jiri gafee ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ nlekọta onwe onye, ​​ụlọ ọrụ resin dị ka mgbakwunye, ụlọ ọrụ Flavour & isi na-esi isi. N'ụlọ ọrụ ọgwụ, A na-eji ya maka njikọ nke (R) -3-Aminobutanol maka nje HIV API Dolutegravir na ndị ọzọ maka API ndị ọzọ, dị ka Crot ...
Agent Na-agwọ ọrịa ma ọ bụ ome osooso nke epoxy resins; N'ime ụlọ ọrụ ọgwụ, ndị etiti maka API ndị ọzọ, dị ka Imazalil, Tioconazole, Bifonazole. Raw Akụrụngwa pesticide dị mkpa maka synergist nke boric acid, nkwadebe nke ụmụ ahụhụ na nje. ☑ Imidazole bụ ezigbo ihe dị mkpa na etiti nke ezigbo ụlọ ọrụ kemịkalụ, nke nwere ọtụtụ ngwa. Imidazole abụghị naanị na purino amino acid nke ribonucleic acid na deoxyribonucleic acid, kamakwa na ...
Catalyst na polyurethane, etinyere na polyurethane siri ike ụfụfụ na elastomer ịgbatị ite ndụ, kpọchie mmeghachi omume na-amụba ikpeazụ cross-lin njupụta. Enwere ike iji ya dị ka onye na-agwọ ihe nke epoin resin, melite akụrụngwa nke ngwaahịa dịka ikwe, ịgbatị na mkpakọ, melite njirimara eletriki nke mkpuchi na nguzogide kemịkal. A na-ejikwa ya na kọmputa na ngwa eletriki; ọ na-eji na e biri ebi sekit mbadamba na integrated sekit dị ka ...
Ọdịdị: White ka fọrọ nke nta ọcha crystalline, hygroscopic Ọcha (Titration): 99.0% min Mmiri: 1.0% max Toluene: 0.2% max amaghị adịghị ọcha: 0.05% max Total adịghị ọcha: 0.2% max PH uru: 11-12.5 25kg / drum, 9Mt / FCL Ihe na-adịghị emerụ ahụ ☑ Ejiri ya na ọgwụ. Cyclen na ihe eji emepụta ya na-egosipụta ihe nhazi nhọrọ maka cations metal, mgbanwe ọla dị arọ, lanthanide na ion ion, na ọbụlagodi maka anions organic ma ọ bụ inorganic. Ezigbo omume nke cyclen na ...
Ọdịdị: ọcha crystasl ntụ ntụ Ọcha (Titration): 99.5% min Mmiri: 0.5% max [Fe3 +]: 5ppm max [SO4 2]: 10ppm max [Cl]: 10ppm max Arọ dị arọ: 5ppm max 25kg / drum, 9Mt / FCL Non - ihe na-emerụ ahụ er A naghị echekwa ebe a na-echekwa Tris dị ka ihe mgbaze maka acid na protein, mana o nwekwara ọtụtụ ojiji dị mkpa. Ejiri Tris maka uto kristal protein n'okpuru ọnọdụ pH dị iche iche. Strength Enwere ike iji ike dị iche iche nke Tris mee ihe iji mepụta eriri nke lamin na C. elegans. A ...
Intermediates maka organic njikọ; ☑ Polyurethane mkpali maka ọkara isiike ụfụfụ na isiike ụfụfụ; Accelerator maka dicyandiamide ma ọ bụ onye na-agwọ ọrịa anhydride; Enwere ike nweta nnu ialDialkylimidazolium site na alkylation nke 1-Methylimidazole. Ofdị nnu metụtara alkylation reagent na anion. Enwere ike ịnweta ọtụtụ mmiri mmiri ionic site na mmeghachi omume a; ☑N-methylimidazole bụ ihe dị mkpa maka akụrụngwa nke ndị na-ahụ maka ọgwụ, nke a na-eji akwadebe losartan, nitazofenone an ...
Anyị dị njikere mgbe niile inyere gị aka.
Biko kpọtụrụ anyị ozugbo.
Ekwentị: + 86-21-6427 9170
2-Methyl resorcinol, CAS 608-25-3, CAS 3003-25-2, CAS 453-18-9, Amụma, C10-C14-tert-alkyl, (R) -3-Aminobutanol,